War - Wax aadan ka ogeyn uumiga ku yaal Qaboojiyahaaga Muraayadaha
Wax aanad ka ogayn uumiga ku yaal Muraayadaada Muraayadaha Muraayadda
Ma ogtahay in qaboojiyaha albaabka dhalada uu ka sameysmayo uumis (biyo) banaanka muraayadda meelaha huurka badan leh? Tani kaliya maahan muuqaal xun, laakiin waxay sababi kartaa biyo inay ka samaysmaan sagxaddaada adag, taasoo sababa dhaawac aan laga soo kaban karin ama ka dhigaysa dabaqyada dusha sare si qatar ah u simbiriirixan.
Dad badan maahan inay ogaadaan arintaan markii ay iibsanayaan qaboojiyaha albaabka dhalada ah maadaama runtii albaabkii hore ee quraaradaha loo isticmaali jiray oo kaliya qaboojiyaha ganacsiga ee dukaamada iyo dukaamada iwm. daabacaadda dhammaan guryaha ayaa leh oo u baahan.
Uumiga ayaa sameeya asal ahaan marka biyuhu ay hawada ku jiraan (huurka), iyo sababta oo ah gudaha qaboojiyaha waa qabow, galaasku sidoo kale wuu qaboobaa, tanna marka lagu daro cimilada qoyan ee ka baxsan qaboojiyaha waxay keenaysaa biyo inay sameystaan, sida subaxdii hore fiiri daaqadaha guriga gudihiisa oo ceegaaga, muraayaddu wali way ka qabowsan tahay banaanka taas oo biyuhu ku samaysmayaan gudaha.
Hadda si aan fikrad kaaga siiyo waxa maalmahan jira maxaa yeelay dad badani iskuma dayaan inay la dagaallamaan dhibaatadan gabi ahaanba, waxaan sameynay qoraallo aasaasi ah;
1. Talaagadaha caadiga ah ee laba glazed (2 x muraayado) ah oo leh muraayad caadi ah ayaa bilaabi doona inay isku ururaan qiyaastii 50-55% qoyaan, tani waa heerka suuqa kuwaana waxay biyo ku shubi doonaan wax kasta oo ka sarreeya 65-70%.
2. Saddex qaybood oo dhalaalaya ayaa si fiican u shaqeynaya maadaama muraayadda hore aysan qabow qabin maxaa yeelay waxaan leenahay 3 x lakab oo aan ahayn 2, marka guud ahaan 60-65% aad ayey u fiican tahay ka hor inta uumiga uusan bilaabmin inuu sameysto.
3. Ka dib waxaan u guureynaa muraayadda LOW E, tani waa daahan gaar ah oo ku socda muraayadda oo ka tarjumeysa falaaraha kuleylka 70% ka wanaagsan, asal ahaan qabow ayey si fiican u ilaalinaysaa waxayna ka caawineysaa in galaaska banaanka la diiriyo. Badanaa LOW E wuxuu gaari doonaa illaa 70-75% kahor intaan uurku bilaaban inuu sameysto.
4. Argon Gas Fill - Nidaamkani wuxuu ku yaalaa cutubyo badan wuxuuna ka caawinayaa ka ilaalinta muraayadda hore inay qabowdo maxaa yeelay waxay bixisaa lakab u dhexeeya 2 x muraayado gaas ah, tani waxay isku darsameysaa mid ka mid ah kuwa kor ku xusan waxay caawin doontaa ugu yaraan 5% kale ka hor intaan qoyaanka la samayn.
5. Muraayad kululeysa - Sida kaliya ee 100% loogu joojin karo uumiga muraayadaha waa galaas kulul. Tani waxay isticmaashaa filim koronto ku shaqeeya oo leh danab hoose oo awooddiisu tahay qiyaastii 50-65 Watt, marka tan run ahaantii ugu yaraan labalaab ayey u tahay isticmaalka tamarta qeybta, badankood waa 3 jeer tamarta. Tani waxay si kastaba ha ahaatee joojin kartaa uumiga jirka ama albaabka albaabkiisa oo isna aad iyo aad u badan.
6. Uumiga jirka iyo albaabka ayaa aad ugu badan unugyada ka jaban. Nidaamka xumbo ee dahaarka jirka gudihiisa ayaa dhirbaaxo badan ku leh warshado badan iyo shaqo xumbo liidata waxay sababi kartaa dhammaan noocyada uumiga, gaar ahaan haddii cutubku yahay bir bir ah. Hargabku weli wuxuu uga imaan karaa qaboojiyaha ilaa qaybo ka mid ah albaabka jirkiisa iyo dhinacyada qaboojiyaha, tani waxay markaa isku ururin kartaa isla sida ay muraayadda u samayn karto, sidaa darteed waa muhiim in la hubiyo in alaab-qeybiyahaagu uu sidoo kale ku daboolo tan. Waxaa jira qaabab lagula dagaallamo taas adoo qayb ka mid ah tuubbada kulul ee hawo-mareenka ka marinaya darbiyada gudaha.
Marka taasi waxay ahayd cashar kooban oo ku saabsan uumiga, markaa dadku iskuma mashquulin iyagoo aan garanayn waxa ay iibsanayaan.